BAAQ Sannadka Cusub ee 2014(TUESDAY - 31/December/2013)
Dallada xidhiidhiya bulshada reer Somaliland ee Yurub (Somaliland Society in Europe) wuxuu dhammaan dadka reer Somaliland ugu horreyn idin leeyahay sannad wacan oo wanaagsan haddii aad dalka ku sugantihiin iyo haddii aad dibada ku nooshihiinba. Ilaahay ayaynu ka rajaynaynaa inuu wakhtigaa, wakhtigiisa inagu wada gaadhsiiyo caafimaad taam ah iyo cibaado toosan (Aamiin).
Dallada SSE sannad walba dhammaadkiisa waxay si dareen ku jiro idinla wadaagtaa dhacdooyinka togan iyo kuwa taban ee sannadka laga soo gudbay iyo waxyaabaha ay tahay inaynu hiigsano sannadka fooda inagu soo haya.
Sidaa darteed, qormadan oo aad u kooban kuma soo ururin karno dhammaan waxyaabaha togan ee ay tahay in aanu ku bogaadino guud ahaan Qaranka Somaliland, gaar ahaana xukuumadda iyo madaxweynaheeda.
Sida ay Dalladu u aragto isla markaana aanu filayno in nalala dareensanyahay dhacdada dahabiga ah ee taariikhda u gashay xukuumadda waxay aheyd markii bishii February ee sannadka 2013 uu Madaxweynuhu darajada ku taxay qaar ka mid ah madaxda qaybaha ciidanka Somaliland ka koobanyahay, taasoo markii dambena la dhammaystirey qaybinta darajooyinka. Dallada SSE waxay tallaabadan u aragtey mid geesinimo isla markaana sare u qaaday haybada iyo karaamada ciidanka Somaliland. Dallada SSE markii arrinkan la hirgeliyay bogaadin iyo hambalyo aan la soo koobi Karin ayay hawada u mariyeen ciidanka iyo Qaranka Somaliland guud ahaanba. Waa dhacdo Dallada SSE ay mudnaan u aragto isla markaana dhinaca xasuusta togan u geli doonta guud ahaan Qaranka Somaliland gaar ahaana xukuumadda Somaliland ee arrinkan muhiimka ah hirgelintiisa ku dhaqaaqdey.
Waxyaabaha taban Dallada SSE waxay sannadkan 2013(ka) tusaale u soo qaadanaysaa in uu ahaa sannadkii loogu xidhida iyo xayiraada badnaa saxaafada iyo wariyayaasha Somaliland guud ahaan, tan iyo intii Somaliland ay la soo noqotay qaranimadeeda. Waxa aan marag iyo markhaati u baahneyn suxufiyiinta ama wariyayaasha iyada oo aan la marsiin nidaamka maxkamadeed loo taxaabay jeel ama xidhitaan iyo weliba xayiraad la geliyay goobo saxaafadeed. Dallada SSE ayaa in badan walaac ka muujiyay arrimahan dhinaca saxaafada, maadaama nidaamka garsoor ee aynu dhiganay uu inoo tilmaamayo in qof suxufi ah ama xafiis saxaafadeed iwm aan tallaabo laga qaadi karin iyada oo aanay maxkamadi ku soo oogin wax dembi ah. . Dhinaca kale saxaafada lafteedu waa iney iska ilaalisaa waxii wax u dhimaya amaba dhaawacaya (A) karaamada shiqshi (B) Qaranimada Somaliland (C) Amaanka iyo nabadgalyada Somaliland (D) iyo sidoo kale iska hubinta wararka aan jirin ee xaqiiqada ka fog.
Dhacdooyinkan ayaa ah ta dhinaca taban ee lagu xasuusanayo sannadka 2013. Dalladu iyada oo ka faa’iideysanaysa baaqa sannadka ayay si guud u soo jeedinaysaa tallooyinka soo socda:
-Caddaalad iyo garsoor ku salaysan eex la’aan iyo sinaan ayaan kula dardaarmaynaa dhammaan Golayaasha iyo Hay’yadaha dawliga ah ee Somaliland. Dallada SSE inay taageerto oo baraarujin ka bixiso in loo caddaalad falo dadka reer Somaliland mudnaan ayay u aragtaa. Ummad aan caddaalad lahayn ma hana qaado, sidaa awgeed xukuumadda Somaliland si gaara ayaanu uga codsanaynaa in la xoojiyo dhammaan imkaaniyaadka ama kaabayaasha inoo adkaynaya in caddaalad lagu wada noolaado. Caddaaladu waa shayga keliya ee deeqa ama kaafiya ummad meel ku wada nool oo isku dan ah isla markaana xoojisa kalsoonidooda, wadajirkooda iyo wada-shaqeyntooda.
-In la xoojiyo Qaranimada iyo dowladnimada isla markaana laga ilaaliyo, lagana dhowro beelnimada iyo reeraysiga oo ah cadowga wiiqi kara ama daciifin kara isku duubnida iyo midnimada reer Somaliland. Sidii marar hore Dallada SSE ay sheegtay arrinkan muhiim ayay u aragtaa in wacyigelin dheeri ah laga sameeyo khatarta ka imanaysa in beelaysigu ka miisaan cuslaado Qaranimada, Hay’adaha Dawliga ah ee aynu abuurney 22 kii sanno ee u dambeeyay iyo weliba Axsaabta Siyaasadeed ee aynu abuurney in lagu tartamo. Qaran iyo Qabiil meel ma wada galaan, waana mahuraan in xukuumdu ay abuurto tashiilaadkii ay arrinkan wacyi-gelintiisa ku xoojin laheyd. Sidoo kale waa in ay xukuumaddu dajiso qorshe abuura dareen amma ahaanshe Somaliland-nimmo oo shiiqiya dareenka qabiilka.
-Dallada SSE waxa kale oo ay dhammaan Golayaasha xukuumadda oo ay hormood u tahay xukuumadda Somaliland si karaamo ku jirto uga codsanaynaa in la xoojiyo wada-shaqeynta iyo wadatashiga dhammaan Golayaasha Qaranka si looga midho dhaliyo hawlaha iyo waajibaadyada ay tahay in la fuliyo iyo weliba ilaalinta karaamada qof mas’uul qaran ah. Xoojinta Dawlad wanaaga iyo in dhammaan hay’adaha dawligu in ay la dagaalamaan musuqmaasuqa iyo lunsiga hantida Qaranka oo ah waxyaabaha ragaadiya maamul wanaaga iyo xushmada dawladnimo ee loo baahanyahay.
-Dallada SSE si gaara ayay diirada ugu haysaa sidii xoog iyo wakhti loo gelin lahaa u hawl-galka qaddiyada Somaliland iyo sidii beesha caalamka aqoonsi looga heli lahaa. Sannadka 2014(ka) waxa aanu rajaynaynaa in aad loogu hawl galo arrinkan iyada oo dib loogu hawl galayo xoojinta la shaqeynta saaxiibada ay Somaliland ku lahayd waddamada dibada iyo weliba in la xoojiyo xidhiidhka iyo wada-shaqeynta wakiiladda Somaliland ee dibada, ururada qurbo jooga iyo Wasaarada Arrimaha dibeda ee Somaliland.
-Arrimaha shaqo la’aanta dhallinyarada iyo khatarta tahriibka ayaan rajaynaynaa inuu noqdo mid ka mid ajandayaasha ugu muhiimsan sannadka 2014.
Sannadka cusub ee inagu soo fool leh waxa ina sugaya hawlo balaadhan oo u baahan u diyaar garow iyo qorshe ku salaysan ku talo gal shaqo oo leh hawl-tilmaameedkeeda ku astaysan fulin ama shaqo ku salaysan wakhti.
-Tusaale ahaan Doorashooyinka la filayo inay qabsoomaan sannadka 2015(ka) ma qabsoomaayaan haddii aan si dhab ah loogu hawl-gelin sannadka 2014(ka) oo aanu rajaynayo inuu noqdo sannadkii waxqabadka.
-Sannadka 2014(ka) waa sannad ay qabsoomayaan kullano qiimo leh oo saameyn guud iyo mid gaar ahaaneedba leh.Shirweynaha Xisbiga Kulmiye ee qorshuhu yahay inuu qabsoomo sannadka 2014(ka) ayaanu rajaynaynaa mid u qabsooma sida danta dalku iyo dadku ay ku jirto isla markaana laga gaadho natiijooyin wax ku ool ah oo adkeeya nidaamka furfurnaanta ee aynu qaadanay.
-Dood Cilmiyeedka Qaran ee loo ballamay sannadka 2014(ka) ayaa sida aanu ku faahfaahinay Baaqii sida gaarka ah u khuseeyay aanu rajaynaynaa inuu noqdo dood cilmiyeed ay ka soo baxaan go’aano iyo qoddobo qiimo iyo waxtar u leh guud ahaan ummada reer Somaliland gudaha iyo dibedba. Guul ayaanu u rajaynaynaa saddexda Xisbi Qaran ee dood cilmiyeedkanu dhexmarayo iyo Akadamiyada Nabada Somaliland oo dhex u ah.
-Mashaariicda horumarineed ee u astaysan dhammaan hay’daha dawliga ah ee Somaliland ayaanu iyaga laftooda u rajaynaynaa in si guul iyo wanaag ku jiro ay uga midho dhalliyaan qorshayaasha u taxan sannadka 2014(ka).
Ugu dambeyn Sannadka 2014(ka) Dallada SSE waxay guud ahaan u rajaynaysaa reer Somaliland in Ilaahay garansiiyo halka dantooda iyo kheyrku ku jiro. Sannad wado jir iyo wado shaqeyn ku dhisan ayaynu filaynaa oo aynu Ilaahay ka baryaynaa. Waa muhiim inaynu dhammaanteen ku baraarugsanaano hawlaha ballaadhan ee ina sugaya iyo sidii aynu mustaqbal sugan oo horumar ku salaysan ugu yagleeli lahayn jiilka mustaqbalka. Dhammaan waxyaabaha inaga qabyada ah xalkeedu waa mid ina wada saaran oo u baahan gacmo is-qabsi, is-dhageysi, kala dambeyn iyo wadashaqeyn buuxda.
Guddigha fulinta SSE.